Xanaanada carruurta ee goobta
Xannaanada carruurta ee goobta waxay ku taallaa goobta shaqada ee loo-shaqeeyayaasha waxayna noqon kartaa daryeel waqti-buuxa ah ama daryeel dib u celin ah. Consortium ay kafaalo-qaaddo daryeelka ilmaha waa iskaashi ka dhexeeya loo-shaqeeyayaasha si ay u maalgeliyaan barnaamijka daryeelka ilmaha, oo inta badan uu maamulo shaqaale qandaraas leh oo ku yaal meel u dhow labada goobood ee shaqada. Daryeelka goobta iyo wadajirka labadaba, loo-shaqeeyayaashu waxay kabi karaan kharashka daryeelka, ama loo-shaqeeyayaashu waxay waydiisan karaan shaqaalaha inay bixiyaan kharashka daryeelka.
Oggolow canshuur celinta federaalka ilaa 25 boqolkiiba kharashyada xarunta, oo lagu daray 10 boqolkiiba kheyraad kasta iyo kharashyada gudbinta, ilaa $150,000 sanad gudihii; Kharashyada ganacsiga laga jarayo cashuurta ee kharashyada xarunta daryeelka ilmaha ee hadhay
Waxay wanaajisaa waxqabadka shaqaalaha waxayna yaraynaysaa maqnaanshaha marka la barbar dhigo marka la isticmaalayo daryeelka ilmaha ee ka baxsan goobta
Waxay badbaadisaa shaqaalaha waqtiga
Si heer sare ah loo qiimeeyo faa'iido ahaan, xitaa shaqaalaha aan carruur lahayn
Helitaanka xarunta goobta ayaa laga yaabaa inay kordhiso muddada naasnuujinta, taasoo siisa faa'iidooyin caafimaad carruurta iyo hooyooyinka
daraasad xaalad: Best Buy
Xannaanada carruurta oo tayo sare leh
waxay bixisaa raaxo iyo bulsho
waalidka iyo daryeelayaasha
Lucie Cregeur waxay jeceshahay inay awood u yeelato inay ilmaheeda u kaxayso qadada xarunta Best Buy. Gabadha Cregeur oo 2 jir ah waa mid ka mid ah 260 carruur ah oo jooga xarunta daryeelka carruurta ee shirkadda, taasoo ay maamusho New Horizons Academy oo u adeegta carruurta da'doodu u dhaxayso lix toddobaad ilaa xanaanada.
"Waan jeclahay u dhawaanshaha gabadhayda sababtoo ah aad ayay ugu habboon tahay in la helo hal safar," ayuu yiri Cregeur, maamulaha suuqgeynta ee Best Buy. "Waa wax lagu farxo in ay aragto waxa ay hooyadu sameyso, waxayna dareemeysaa qayb ka mid ah qoyska Best Buy. Si aad u hesho isdhexgalka goobta shaqada-carruurtu waa wax cajiib ah, waxaana jeclahay inaan arko heerka la shaqaynta macalimiinta. Waxay u muuqataa sidii bulsho ka soo horjeeda meel aan ku dejiyo oo aan ka soo qaado ilmahayga."
Marka laga soo tago dareenka bulshada, Cregeur sidoo kale waxay jeceshahay in jadwalka xarunta xannaanada uu la socdo jadwalka shaqadeeda. Waxay haysataa daryeel la saadaalin karo inta lagu jiro maalmaha shaqada tafaariiqda sida Black Friday, marka xarumaha xannaano-maalmeedka ee dhaqameed la xidhi karo.
Faa'iidada kale ee daryeelka ilmaha goobta ee Cregeur waxay ahayd awoodda ay ilmaheeda ku dhasho goobta markay ahayd hooyo nuujinaysa. Waxay sheegtay inay sii dheeraysay wakhtiga ay awooday inay naaska nuujiso gabadheeda.
Best Buy waxa ay haysay xanaano caruur goobta 16 sano Xitaa inta lagu jiro cudurka faafa, dadku waxay dooranayeen inay carruurtooda ku tuuraan xarunta daryeelka carruurta xitaa haddii ay ka shaqayn karaan guriga.
Cregeur waxa ay sheegtay in doorashada xannaanada carruurta ee goobta ku taal ay u muujinayso iyada, asxaabteeda iyo shaqaalaheeda mustaqbalka in Best Buy ay ballan u qaadayso qoysaska - oo aan ahayn hooyooyinka oo keliya, laakiin aabayaasha iyo daryeelayaasha kale. Goobtii ugu dambaysay ee ribbon-goynta qolka nuujinta cusub, waxay ku aragtay aabbayaal badan oo halkaas jooga sida hooyooyinka.
Waxay jeceshahay inay aragto aabayaasha oo caruurtooda qadada u qaadanaya, sidoo kale. Cregeur waxa uu sheegay in aabayaashu u baahan yihiin in la taageero goobta shaqada si la mid ah hooyada. Waxay arkaysaa ka mid noqoshada kooxda Kheyraadka Shaqaalaha ee shirkadda, "Shabakadda Isku-Darka Qoysaska Diirada Saartay," Kaas oo ay ku jiraan daryeelayaal kala duwan oo ka tirsan koox-hoosaadyada walaalaha ilaa aabbayaasha wadaaga agabka iyo talooyinka oo is taageera.
Shaqaalaha: 49,737 (xarunta dhexe)
https://medium.com/@amelzhd/onsite-childcare-how-to-get-started-courses-from-the-pioneers-c21baedb44e2 https://www.outsidebusinessjournal.com/issues/diversity-equity-inclusion/ kiiska-goobta-xanaanada-carruureedka/
https://www.bbc.com/worklife/article/20220215-could-on-site-childcare-lure-parents-back-to-the-workplace https://clutch.co/hr/resources/how-to -bixinta-xannaanada-carruurta-faa'iidooyinka
Machadka Caafimaadka Dadweynaha ee Wisconsin
Enz, Cathy A. iyo Janet H. Marler. "Barnaamijyada Xannaanada Carruurta ee Macno Sameeya." Golaha Aqoonyahanka. Jaamacadda Cornell ee Maamulka Hudheelada. 1993kii
Durekas, Fran. "Ka caawinta Helitaanka Xannaanada Ilmaha ee Goobta." Hooyo shaqeysa. November 30, 2009